लकडाउनले सताएको छ, तड्पाएको छ र अवसर पनि दिएको छ - Jhilko
डी बी क्षेत्री, प्रवक्ता, एनआरएनए
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा नेपाली श्रमिकको ११ वटा शव अलपत्र परेको र कोरोना भाइरसका कारण त्यसलाई नेपाल लैजान नसकेको असाध्यै पीडादायी, मर्मस्पर्शी घटना भएको छ ।
महामारीको रुपमा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण कति श्रमिकको विदेशमा हालत यस्तै होला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । देशमा रोजगारी विकल्प नहुँदा विदेशिन बाध्य श्रमिकको अवस्था कोरोना भाइरसको समापनसम्म कस्तो होला ? यो अहिले नै कल्पना गर्न सकिदैंन । जो मरे, तिनको पीडा अलग्गै छ, बाँच्नेहरु पनि देश, समाज र परिवारबाट अलग भएर कति दिनसम्म यसरी पीडाका साथ रहनुपर्ने हो ? देशका ऊर्जाशील लाखौं पाखुरा विदेशमा बस्नु परेको छ । जुन तरिकाले होस, कोरोना भाइरसको समापनपछि विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले यसबाट गम्भीर शिक्षा लिनैपर्छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन लगाएको चौथो हप्ता पुगेको छ । लकडाउनले सबैलाई सताएको छ, तड्पाएको छ तर यसले नेपाल सुहाउँदो एउटा अवसर पनि दिएको छ । यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने ? विदेशमा रहेकाहरुलाई देशमा तत्काल फर्केर काम गर्ने अवस्था छैन तर देशभित्र रहेकाहरुले अब किन नलाग्ने ?
सामाजिक दुरी कायम गरेर तत्काल गाउँ स्तरका कार्यक्रम लैजाऊ भन्ने कोरोनाले सन्देश दिएको छ । यो लकडाउनले हामीलाई अभिप्रेरणा पनि दिएको छ । सुखमा शहर र आपतमा आफ्नै गाउँ भन्ने शिक्षा दिएको कुरा पनि प्रमाणित भएको छ । विभिन्न काम, अध्ययन, जागिर, मजदुरी आदिको खोजीमा शहर पसेकाहरु यतिबेला रातविरात नभनी लकडाउनलाई लत्याउँदै गाउँ फर्किनेको पनि कुनै कमी छैन ।
गाउँमा खेतीपातीको काम सुरु भएको छ । धेरै ठाउँमा खेत र बारीमा मकै छर्ने चटारो छ भने विभिन्न तरकारी खेती गर्ने मौसम पनि हो यो । त्यसैले लकडाउनले खेतीपातीको काम सघाउने र कृषिका अन्य कर्महरु गरेर आफ्नो नेपालीपन र गाउँले जीवनलाई पुनः नवीकरण गर्ने अवसर पनि लकडाउनले जुटाइ दिएको छ । भौतिक दुरी कायम गरेर खेतीपातीको मेलोमा आफ्ना बाआमासँग जागिरे र पढेलेखेका छोराछोरीहरु पनि भिडिरहेका छन् ।
त्यसैले लकडाउनलाई हामीले एकान्तबास र एक्लोपनामा होइन, भौतिक दुरी कायम गरेर कुनै नौलो कामको सिर्जना गर्न, आफूले आफैँलाई मोटिभेट गरी ब्रेनवास गरेर ताजा बनाउँदै अविष्मरणीय कार्य गर्ने अवसरका रुपमा लिन सक्नु पर्छ ।
लकडाउनका कारण कतिपयले आफ्नो रोजगारी गुमाएका पनि हुन सक्छन् । हामीले यो बेला हल्लिएको मगज र मस्तिष्कलाई फेरि बसाउँदै र स्थिर पार्दै लयमा ल्याउनै पर्छ । लाखौ मानिसको कारोनाले रोजगारी खोसिए पनि हामी यसलाई कृषि कर्ममा लगाएर, साहित्य सिर्जनामा लगाएर, घरमै पाइने बस्तुहरु कागज, बाँस, पुराना कपडा आदिबाट नयाँ नयाँ बस्तु तथा खेलौनाहरु पनि बनाउन सक्छौंँ ।
विदेशमा रहदा पनि नेपालमा नै परिवारसँगै रहेर के काम गर्ने भनेर यो बेलामा सकारात्मक योजना बनाउनतिर लाग्ने कि ? कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै जाँदा धेरैको रोजगारी जानसक्ने कुराको आँकलन गरेर नै हामी अगाडि बढ्ने सोंच बनाउनै पर्छ ।
र, अन्त्यमा, सरकारले कृषिसहितका अत्यावश्यक सामान उत्पादनका लागि प्राथमिकता दिएर तत्काल योजना बनाउनु पर्यो । श्रम र कृषि मन्त्रालयबाट एकीकृत योजना बनाउन पहल गरिहाल्नु पर्यो । कोरोना भाइरसको समापनसम्म पुग्दा विदेशमा रहेका कति श्रमिकको रोजगारी गुम्छ भनेर अहिले नै एकिन गर्न नसकिए पनि १५ लाखको रोजगारी गुम्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट फर्किएका ऊर्जाशील पाखुरालाई देशमै वैकल्पिक रोजगारी दिने कार्यमा अहिलेदेखि नै सरकारले योजना बनाउनु पर्छ । २८ चैत्र २०७६
बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरसका कारण भएको लकडाउनको मौका छोपी रातको समयमा बिगत...
नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे उम्मेदवारी दर्ता
उनको प्रस्तावकमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत छन्। माघ ९...
प्रचण्डको चिन्ताः कम्युनिष्टमा वैचारिक विचलन आयो, पार्टीमा...
उनले हिजोभन्दा आज कम्युनिष्टको अनुशासनको स्तर गिर्दै गएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।